Garabka dhallinyarada heer qaran ee Xisbiga Waddani waxay hambalyo meher u dirayaan, boqorka Maxamed Muuse Aw Muxumed (Tiyo) iyo boqorada Faadumo Cabdiraxmaan Cabdalla oo meherkoodu maanta ka dhacay magalada Hargeysa. - Haldoornews
Garabka dhallinyarada heer qaran ee Xisbiga Waddani waxay hambalyo meher u dirayaan, boqorka Maxamed Muuse Aw Muxumed (Tiyo) iyo boqorada Faadumo Cabdiraxmaan Cabdalla oo meherkoodu maanta ka dhacay magalada Hargeysa.
Hambalyo meher wacan waxay garabka dhallinyarada Heer Qaran Ee Xisbiga Waddani u dirayaan boqor Maxamed Muuse Aw Muxumed(Tiyo) iyo boqoard Faadumo Cabdiraxmaan Cabdalla oo meherkoodu maanta ka dhacay magaalada Haregysa gaar ahaan Green Plaza Hotel. Waxaanu si gaara hanbalyada ugu diraynaa Maxamed Muuse Aw Muxumed (Tiyo) oo ka mida saraakiisha garabka dhallinyarada heer qaran ee Xisbiga Waddani. waxaanyu leenahay Guurkiinu guur khayr gurigiinu guri negi guuloow ka yeel, noqda labadii isku waara ee ubad khayr qaba kala hela, wiil iyo caano gabadh iyo caano, barakooba oo badhaadha intaad dunida nooshiin.
Af-hayeenka dhallinyarada heer qaran ee Xisbiga Waddani.
Is Burinta Qofka: Qalinkii Maxamed Baashe X. Xasan
Askarigii Sharaf la hoyday oo qoyskiisii deeq ay ku farxeen la gaadhsiiyey.